သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာ ခလုတ်များ လေး -> ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
size: 18/110, 19/120
Equivalent Systems: 332LGH KSP
ဒါဟာလက်တော်ဖြင့်အီလက်ထရောနစ်အပ်ချုပ်စ​​က်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်ထားသော bobbin buttonholing စက်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုး wear များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်စလွယ်ကိုဆွဲချုပ်ပါပဲ။ Equivalent စနစ်များ: 332LGH KSP ။
Equivalent Systems: SMX332EXTLG
machine: Button ကိုအပ်ချုပ်စ​​က်
အဆိုပါဝိသေသတစ်ခု groove မှာမိုးသည်းထန်စွာတုံးပတ်ပတ်လည်မှတ်နှင့်လက်ဝဲဘက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကသာအ 14/90 အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Button ကိုအပ်ချုပ်စ​​က်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါဟာ JUKI အပ်ချုပ်စ​​က်စီးရီးအချို့အမျိုးအစားများနှင့်ကိုက်ညီ။ ဒါကြောင့်တခြားနှင့်ညီမျှရေးစနစ်မထားဘူး။